နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2013 ၏စာမျက်နှာ 50 NAB သတင်းများ | 69 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 50)
အဆိုပါ FCC သည်၎င်း၏အားကစားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်စည်းကမ်းများရပ်တန့်နိုင်ပါစေ - TIME
အဆိုပါ FCC သည်အပြောင်းအလဲကိုသာအမျိုးသားရေး cable ကိုထုတ်လွှင့်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ... ၎င်း၏အားကစားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက် RulesTIME ရပ်တန့်နိုင်ပါစေ။ ဘယ်ဟာ, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, entertainment.time.com အပေါ် Broadcasters.See အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ရင်ဆိုင်နေရတာကြာပါပြီထားပါတယ်မဟုတ်
Highly အဆင့်မြင့်ပါဝါ, မြန်နှုန်းနှင့် Adorama မှာ Pre-Order များအတွက် Now ကိုရရှိနိုင်သောအလင်း Shape တတ်နိုင်သမျှအတူ Profoto B1 500 AirTTL Cordless ဟာ Off-ကင်မရာ Flash ကို
Adorama လက်စွဲစာအုပ် metering နယူးယောက်မပါဘဲစုံလင်သောထိတွေ့မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမူပိုင်-ဆိုင်းငံ့ AirTTL နည်းပညာစမ်းသပ်မှု-drives တွေကို Profoto ရဲ့တော်လှန်ရေးသစ်ကိုချွတ်-ကင်မရာ flash ကို, နယူးယော့ - နိုဝင်ဘာလ 5, 2013 - Profoto ယနေ့ Off-ကင်မရာက၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က B1 500 AirTTL ၏တရားဝင်ဖြန့်ချိထုတ်ပြန်ကြေညာ flash ကိုနှင့် Air အဝေးမှ TTL-C ကိုကို Canon များအတွက် (အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို) - Pre-အလို့ငှာယခုရရှိနိုင်ပါနှစ်ဦးစလုံး [ ... ]
အကြံပြုက Short: Brandon LaGanke ရဲ့ Playhouse
I’mafan of Brandon LaGanke’s short film Play House, writing in my print magazine SXSW report, “Play House is an elegantly disturbing suburban horror short in which the defeated apathy ofawife, daughter and son is revealed to be sickeningly explicable.” The short has just gone up on Vimeo where it isaStaff Pick. Check it out ...
အသံချဲ့စက် Guy K. Traylor အားကစားကွင်းမှာနည်းတွေနဲ့ပိုလုပျဆောငျဖို့ Firetron Enable Harman ရဲ့့ JBL Professional က CBT ကော်လံ
NORTHRIDGE ကယ်လီဖိုးနီးယား - Rosenberg ကတက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်း Lamar Consolidated လွတ်လပ်သောကျောင်းခရိုင် High School တွင်ဘောလုံးအသင်းမှနေအိမ်, Guy K. Traylor အားကစားကွင်းတစ် 12,000-ထိုင်ခုံဘက်စုံသုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်။ [ ... ] ၎င်း၏အသံအားဖြည့်စနစ်, Harman ရဲ့့ JBL အားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ထူးခြားတဲ့စနစ်သစ်ကို install လုပ်ဖို့ဖြတ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Firetron ဌနာခရိုင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရှာကြံ
trailer စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့: Godfrey Reggio ရဲ့ဧည့်သည်များ
The premiere of Godfrey Reggio’s Visitors, hosted by Steven Soderbergh and with Phillip Glass’s score performed live by the Toronto Symphony Orchestra, was my most singular experience at this year’s Toronto Film Festival. As I wrote in the current issue of Filmmaker: Glass’s haunting soundtrack is among his best, while Reggio’s film isaradical departure from hyperkinetic works like ...
အစိုးရဗီဒီယို - မတည်ရှိ်ဆောင်မှုများထဲသို့နယူး Switcher သငျ့
ရှိရင်းစွဲ FacilitiesGovernment ဗီဒီယိုထဲသို့နယူး Switcher သငျ့ "SD ကကနေ HD ကိုမှပြောင်းရွှေ့လာသောအခါတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုစနစ်၏နီးပါးအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်မလိုအပ်," Will ရေ, NewTek ရဲ့အကြီးတန်းဗီဒီယိုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ specialist.See www.governmentvideo.com ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်
ကမ္ဘာသစ်အမိန့် - ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဂရစ်ဖစ်ကမ္ဘာ့ဖလား
ကမ္ဘာသစ်မိန့် Computer ကိုဂရစ်ဖစ်ကမ္ဘာ့ဖလားအလုပ်အဖွဲ့တခုပြင်းထန်သောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား၏အချိန်ကန့်သတ်အောက်မှာ Hutzel နှင့် CG အနုပညာရှင်များသည်သူ၏ပိန်အဖွဲ့ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း, '' စီးရီးရဲ့ခြင်္သေ့ဝေစုလှုပ်ရှားဖို့ NewTek ရဲ့ LightWave 3D ရေးအတွက် ... www.cgw အပေါ်ကိုကြည့်ပါ။ com
Alcorn McBride နယူးပြတိုက်ပြကွက်များအတွက် Choctaw အဘိဓါန် Codetalkers ၏ပုံပြင်ကိုပြောပြပါကူညီပေး
အဆိုပါ Choctaw အဘိဓါန် Codetalkers ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမကြာသေးမီကသည်အထိသမိုင်းကြောင်းမှဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်, Tuskahoma အတွက်ဥက္ကလာဟိုးမားကက်ပီတောလ်ပြတိုက်၏ Choctaw အဘိဓါန်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအသစ်တခုပြပွဲ Alcorn McBride ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုစက် HD ကို DVM8500 video player ကိုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစက်ထဲကနေထောက်ခံမှုနှင့်အတူအလင်းသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းဆောင်တတ်၏ AM4 A / E ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂျစ်တယ်အသံကစားသမား။ [ ... ]
50 ၏စာမျက်နှာ 69«ပထမဦးစွာ...203040«4849505152 » 60...နောက်ဆုံး»